FESTURIS Brezila: Vietnam, Cambodia, Laos ary Myanmar dia mampitombo ny solontena aziatika
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » FESTURIS Brezila: Vietnam, Cambodia, Laos ary Myanmar dia mampitombo ny solontena aziatika
Ny Fair International Tourism Fair of Gramado (FESTURIS) dia manohy mampiasa vola be amin'ny fisarihana ireo tanjona iraisam-pirenena. Vietnam, Kambodza, Laos ary Myanmar dia iray amin'ny toeran-kaleha vaovao amin'ity fanontana ity, manitatra ny fandraisana anjaran'ny Aziatika amin'ny hetsika. Ny hatsaran-tarehy voajanahary sy ny lova ara-tantara sy ara-kolotsaina avy amin'ireo firenena efatra dia hatolotry ny Images Travel, izay mikasa ny hanitatra ny orinasany any Brezila sy Amerika Latina.
“Sambany izahay any Brezila ary mino izahay fa ny fandraisana anjara amin'ny Festuris no fomba tsara indrindra hahitana ny tsena Breziliana ary hampiroborobo ny marika eto amin'ny firenena. Mivelatra haingana ny tsena any Vietnam, Kambodza, Laos ary Myanmar. Na izany aza, marihinay fa ny ankamaroan'ny masoivoho dia miara-miasa amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany lehibe, izay tsy afaka manolotra serivisy miovaova sy manokana. Manantena izahay fa hahatratra ity fangatahana ity, ”tetikasa CEO CEO Images Travel, Timo Bry.
Tamin'ny taona 2018, nahazo mpitsidika 15.4 tapitrisa i Vietnam, fiakarana 20% izany tamin'ny taon-dasa. Kambodza sy i Laos koa dia nanitatra ny tanjon'izy ireo ho tanjona, nahazo 6.2 tapitrisa sy 3.8 tapitrisa mpitsidika tamin'ny taon-dasa. Ny fizahan-tany dia ampahany lehibe amin'ny harin-karena faobe ao amin'ireo firenena ireo.
GVA dia manolotra fahasamihafana amin'ny toerana mahafinaritra sy mahafinaritra
Fantatra amin'ny haitraitra, haitraitra, toetr'andro tantaram-pitiavana sy toerana mahafinaritra, Monaco dia ho iray amin'ireo manintona ny Wedding Space, mampiseho ny mety rehetra amin'ny fizahantany manokana amin'ny fampakaram-bady. Seychelles, Jordania ary Norvezy koa dia nanamafy ny fandraisany anjara amin'ny FESTURIS, manolotra safidy isan-karazany amin'ny Luxury Space - ny toerana tsirairay misy ny mampiavaka azy sy ny hatsarany. Ireo tanjona efatra dia hatolotry ny Global Vision Access.
“Festuris dia hetsika voalamina tsara. Tena tiako ny fifantohana amin'ny fanavaozana isaky ny fanontana, misy fitandremana lehibe foana tokony hitondra zava-baovao ho an'ny mpandray anjara, na ho an'ny fampirantiana na ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany. Raha ny marina, ny kalitaon'ny agents agents sy ny mpandraharaha dia tsara ary iray amin'ireo antony atrehinay ny foara miaraka amin'ireo mpanjifantsika isan-taona. Ny fisongadinana iray hafa dia ny Luxury Space, izay eo no ho eo ny fiverenany rehefa manao fihaonambe mialoha miaraka amin'ireo mpividy ireo mpanohana ”, hoy ny talen'ny Global Vision Access Gisele Abrahamão.
Hotely Hard Rock, Hotely Nobu ary Unico 2087 nohamarinina tao FESTURIS
Ny fanamafisana ny vondrona fampirantiana voamarina tao amin'ny International Tourism Fair of Gramado (FESTURIS), izay atao ny 7 ka hatramin'ny 10 Novambra 2019, ny RCD Hotels dia manangom-bola indray amin'ny fisehoana tetikasa manan-kaja amin'ny fandraisana vahiny iraisam-pirenena.
Ny Hard Rock Hotels All Inclusive Experience (Cancun, Los Cabos, Punta Cana, Riviera Maya ary Vallarta) dia ho avy ao amin'ny Wedding Space - sehatra fampakaram-bady manokana, iray amin'ireo mitombo haingana indrindra eo amin'ny tsenan'ny mpizahatany. Marika lehibe telo hafa no nohamafisina ho an'ny Luxury Space - Nobu Hotel Miami Beach, Nobu Hotel Los Cabos ary Unico 2087 Hotel Riviera Maya.
“Fahafinaretana ny fanamafisana ny fisianay indray ao amin'ny Festuris Gramado's Luxury Space ary handray anjara voalohany amin'ny Wedding Space vaovao. Festuris dia foibe tena matihanina ary hitanay ity endrika fandaharam-potoana ity miaraka amina fihaonana azo antoka amin'ireo maso ivoho, manome fotoana sy fifandraisana ary varotra maro izany, "hoy ny talen'ny varotra RCD Hotels, Carla Cecchele.
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo Cunard dia miarahaba ny mpiara-miasa aminy taloha indrindra
Mitsambikimbikina ny vidiny, tombony isaky ny efitrano ny trano fandraisam-bahiny Atsinanana sy Afrika Avaratra